Umhla My Pet » umphezulu 10 Photo Ubudenge
ukubuyekezwa: Apr. 06 2020 | 3 min ukufunda
Uluhlu hayi-ziteksi zilandelayo yaqulunqwa ukusuka ndlebe kunye ubude bexesha daters online kwaye zizigqeba amashishini nabasebenzi abanika inkxaso lweenkonzo ukuthandana online ezininzi ezinkulu. Yintoni umgca ngezantsi? Inxalenye enye ibalulekileyo ukuthandana online yindlela ubamba isenzo elula yokumela wena eneefoto.
1. Akukho ngeposi ifoto konke konke. Akukho ngeposi ifoto zonke kungathiwa impazamo zimandundu. Kufuneka ube nento ukufihla ukuba ifoto yakho indawo engenanto. Siyathemba ukuba, wonke umntu ucinga njalo. Ke ukuba ibinzana senyongo “cela picture lam” ke isandi intle neziqhwala ezi ntsuku. Ichaza ngokwakho ngamazwi neziziqhwala, kakhulu.
2. Ngeposi ifoto ukuba ngaphezu 2 okanye 3 iminyaka ubudala. Ukuba ungaphezulu kakhulu kunokuba umfanekiso wakho uye wenza isono “ubudala icocwe” online. Oku kuqinisekisiwe ukuba ubudlelwane yakho emhlabeni shaky ukususela ekuqaleni yaye idla ngephanyazo “ukujongana ndingumgqithi.” Wakhe wazibuza ukuba kutheni loo mhla yesibini soze yenzeke? Yinto eqinileyo bet abayi kukuxelela ukuba “yobudala ndachetywa”.
3. Kukuba nani encinane kwisiqalo kuwe? Ukuba umfanekiso yakho encinane ngoko aninako kubonwa ngokucacileyo kufuneka lempundu-mbi okanye into ukufihla. qhwalela. Fumana ifoto wokwenene ngokwakho. Siye esele ibonwe Yosemite – ngobuso.
4. Esichengeni ngokusebenzisa ifoto kunye ibinzana engaqhelekanga okanye Goofy. Ukuba ngobulungisa kuphela zikufutshane, kinda’ acacelwe ukuba wena Kubonakala ngathi waliva kanye into unmentionable, lixesha lokuba ifoto engcono. Nokuba iprozi UShakespeare kwiprofayile yakho ungakwazi ukumelana nobubi uluvo yokuqala eyenziwe ngumntu unxila, okanye ngakumbi, ukuba ezixhomisa amehlo “yebhadi kwi izibane” khangela.
5. Ingaba nguwe – okanye ke nomnye ngasekhohlo kwakho – okanye ngulowo kwisiqalo kuwe? Yini na ukuba bephuzana loo ndoda yasemzini ngenkangeleko esidleleni? Ngubani na loo mntu ngesandla sakhe phezu esile lakho? Ngaba ezo abazali bakho? Ukuba kufuneka ukuqashela okanye ukuba ukuyicacisa kokubhaliweyo yakho yabucala, sele lidluli ixesha kakhulu. Zama ukuphepha ngeposi ifoto kunye abantu abaninzi kunawe kuyo, ingakumbi xa omnye umntu(s) abantu besini esahlukileyo, nokuba ucinga ukuba ifoto kuni okulungileyo.
6. Kokundiza ezo iindondo. Ukuya printwayo ngaba thina? Ukudlala Joe Hollywood?Ngokunxiba iindondo nje ucebisa unento ukuzimela.
7. Youat iqela, intloko yokunqakulwa yintsini, utywala ngesandla, havingso ezazindonwabi- ukuba usiyeke Puke. Oku akuthethi kuthi siyakholwa ukuba getdrunk kwaye iqela 5 nobusuku ngeveki, kodwa kutheni sifanele uthathe ithuba.
8. Ukukholosa umama wakho okanye umzalwana ukuba bakuxelele ukuba zeziphi iifoto ukuba shoulduse online. Umama wakho ucinga nokuba umfanekiso wakho goofiest looksabsolutely umtsalane. Imbono yakho etyekele, kakhulu. Loo olithandayo photothat ucinga ubonakala, kusenokwenzeka ukuba eyona entle. kunokuba, cela someoneof besini esahlukileyo nina ukufumana nomtsalane apho iifoto wena shoulduse online. Nantso umlinganiselo yeyona oluchanileyo photo'seffectiveness yakho. Ngoba? Kaloku xa ngeposi ifoto yakho intanethi, you'llbe kukutsala abantu enjalo – okanye izimvo kuwo – indawo thousandtimes ngosuku.
9. ulusu Showingtoo kakhulu. Oku akuyi kukunceda nje iimpendulo engalunganga ukuba you'rea umfazi, kwaye akukho neempendulo konke konke ukuba sele umntu. kukho areexceptions, kodwa abaninzi.
10. Ukusebenzisa ezikhawulezayo zakho ubusilika kuba ucinga usebenzisa professionalphotos na “Izikali”. Ukusebenzisa umgangatho wocikizeko photosis into yokuqala iingcali intanethi ukuthandana zibonisa ntoni xa takeyour nzulu ukuthandana online. Ngokuqinisekileyo asibathembanga impilo yakho,umbono wakho okanye iinwele zenu ukuba andilociko. Ngoko kutheni uthembe umfanekiso yakho intanethi ukuya kwenye? Ukwenza luhleli uluvo lokuqala professionalphotos yindlela ebhadlileyo ukubeka ubuso bakho okusemandleni phambili.
Njani ukubona Ukuthandana Online Fake Profile?
Ngubani athi U Khawuleza?